'सामसुङ सबैका लागि 'सिम्बोल अफ द प्रेस्टिज' भैसकेको छ, आज मलाई यसकै नामबाट चिन्छन्' : दिपक मल्होत्रा - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘सामसुङ सबैका लागि ‘सिम्बोल अफ द प्रेस्टिज’ भैसकेको छ, आज मलाई यसकै नामबाट चिन्छन्’ : दिपक मल्होत्रा
Posted by Headline Nepal | २३ भाद्र २०७४, शुक्रबार १९:३२ |
मोवाईल सबै मानिसको ‘पर्याय’ झै बनेको छ । दैनिक जीवनमा मोवाईल यस्तो सारथी बनेको छ जसले हरतरह सञ्चारका माध्यमबाट जो कोहीलाई जहाँसुकै जोडिरहेको हुन्छ । सन्देश प्रवाह गर्ने उदेश्यले सुरु भएको मोवाईल, आवश्यकता हुँदै बिलाशिलता सम्म आईपुगेकोछ । यो सब मोवाईलमा आएको बिकाससँगै बढेको मानिसका असिमित चाहनाहरुकै उपज हो । असिमित आकाँक्षाहरुको परिपूर्तीका लागि हुने मोवाईल व्यापारमा करोडौँ अपेक्षाहरु पनि गाँसिन्छ । यही भीडमा आफूलाई अब्बल स्थापित गर्दै पहिलो नम्बरमा रहेको ब्राण्ड हो – सामसुङ । मोवाईलको बजारमा निरन्तर नम्बर १ बन्न सफल सामसुङका ब्यापारिक राजबारे बुझ्न यस्को आधिकारिक ‘डिस्ट्रिब्युटर’ सँस्था ईन्टिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन्स (आईएमएस) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्रासँग हेडलाईन नेपालले गरेको कुराकानी :
ट्रेड विजिनेसमा अहिले चुनौतीहरु केके देख्नुभएको छ ?
मेरो आफ्नो ट्रेड विजिनेस भनेको मोबाईल फोन हो । त्यो विजिनेसमा कुनै समस्या नै छैन । विगत केही वर्ष अगाडी यसमा निकै चुनौतिहरु थिए । किन भने हाई भ्यालु आईटम, सानो चिज महङ्गो पर्ने, खुल्ला सिमानाका कारण चोरी पैठारी हुन्थ्यो । त्यसले गर्दा हामीले भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । लिगल च्यानलबाट हामीले जुन डिस्ट्रिव्युटरहरुको रुपमा हामीले ल्याउँछौँ फोन । हामीले चोरी पैठारीबाट आएको फोन रोक्नै नसक्ने स्थिती थियो । त्यसले गर्दा त्यतिबेला धेरै गाह्रो थियो । हामीले बारम्बार सरकार तथा अर्थमन्त्रीकहाँ गएर सल्लाहहरु गर्यौँ । पछि मोबाईल फोनमा ड्युटी फ्रि गरिदिनुभयो । अहिले हामीले तिरेको भ्याटमा ४० प्रतिशत मात्र तिर्दा हुन्छ । जसकारण मैले गरेको ट्रेड विजिनेसमा कुनै समस्या छैन । एकदमै राम्रो छ ।
विगतमा भन्नुभएको थियो, बाहिरबाट जतिपनि मोबाईल आउँछन् र बेचिन्छन् त्यसको सिस्टम हुनुपर्छ । त्यसले आयमा पनि सरकारलाई असर गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा किन अघि बढेन ?
हामीलाई ड्युटी फ्रि गरियो र ६० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा ल्यायो । त्यसपछि नघटाउने भन्यो । हामीले माग गर्यौँ, हामीले पुरा भ्याट तिछौँ, केही भन्सार पनि तिछौँ । तर सरकारले गृहमार्केटलाई बन्द गर्नुपर्यो । सरकारले बन्द गर्छुभन्दैमा यो बन्द हुँदैन । खुल्ला सिमानाका कारण । त्यसको लागि एउटा यस्तो सजिलो तरिका छ कि, आईएमईआई नंबर ब्लक गर्ने, यसलाई ह्वाईट लिष्ट भनिन्छ । यो ब्लक भैसकेपछि गैरकानुनी रुपमा आएको फोन नेपालमा चल्दैचल्दैन । कानुनी रुपमा नेपाली डिस्ट्रिव्युटरमा आएको फोनमात्र चल्छ । हार्मील्े फोन ईम्पोर्ट गर्नुभन्दा पहिला आईएमईआई नंबर नेपाल टेलीकमलाई पास गरिदिन्छौँ । टेलिकमले त्यो आईएमईआईलाई एनसेल, नेपाल टेलिकम लगायतमा पास गरिदिन्छौँ । उनीहरुको सिस्टममा पठाईन्छ । हामीले त्यो नंबर सिस्टममा ईन्ट्री गर्दा म्याच भयो भने मोबाईल चल्थ्यो । त्यो धेरै सजिो थियो । यो भैदिएको खण्डमा नेपालमा हरेक कानुनी रुपमा आएको मोबाईलफोन मात्र चल्थ्यो । उपभोक्ता ठगिने सम्भावना कम हुन्थ्यो । तर अब यो लागु गर्ने कुरामा बारम्बार मोबाईल असोसियसनको तर्फबाट धेरै छलफल गयौँ । अस्थिर सरकारका कारण समस्या आईरहेको छ । यसमा एनसेल तयार भैरहेको छ तर नमस्ते मोबाईल तयार भएको छैन । हाम्रो प्रयास जारी छ । हामीले सरकारसँग भनेका छौँ, जुनदिनसम्म यो कुरा लागु हुन्छ, हामीसँग भ्याट, भन्सार दुवै लिनु, हैन भने चोरीपैठारी बढिरहन्छ ।
पछिल्लो समयमा विभिन्न आईटमका मोबाईलफोनहरु भित्रीरहेका छन्, कोहीले क्यामेरामा फोकस गरिरहेका छन्, कोसैले केलाई फोकस गरेका छन् । तर स्यामसुङ मोबाईल टसको मस भएको छैन, यसले आफ्नो पोजिसन यथावत राखिरहेको छ, पहिलो नंबरमा बसिरहेकै छ । यो सफलताको राज के हो ?
एउटा विश्व बजारको कुरा छ, एउटा नेपालको कुरा छ । मैले २००१ देखि स्यामसुङ बेच्न सुरु गरेको । त्यतिबेला नोकिया फोन हावी थियो । स्यामसुङ कसैले हेर्दैनथ्यो । तर मेरो एउटा निरन्तर प्रयासले गर्दा विश्वबजार भन्दा नेपालमा स्यामसुङको शेयर बढी छ । नेपालमा अहिले ४८ प्रतिशत स्यामसुङको शेयर छ । तर विश्वबजारमा हेर्ने हो भने २५ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसमा मेरो आफ्नो पनि कुरा छ र कम्पनिको पनि सहयोग छ । सारा कुरा छ । अहिले चाईनिज मोबाईलहरु आएर यति ठुलो खर्च विज्ञापनमा खर्च गरेको छ । स्यामसुङ अहिले आफ्नो ठाउमा बसिसकेको छ । उसले ईज्जत कमाईसकेको छ । अब उसले केमा खर्च गर्दछ भने, रिसर्ज एण्ड डेभलपमेन्टमा भयङ्कर खर्च गरेर बनाएको छ । त्यसमा कहिले कस्को कुनै कारणले कमिकमजोरी आउनु आफ्नो ठाउँमा छ। हैन भने सामसुङ भनेपछि एउटा ब्राण्ड बनिसक्यो । अर्को कुरा त स्यामसुङ सिम्बोल अफ द प्रेस्टिज पनि भयो । एकाथरि मान्छेले त स्यामसुङमात्र प्रयोग गर्दछन् । निम्न वर्गका कुरा, चाईनिज सामानहरु सस्तो आईरहेको छ । तर सामसुङले एउटा यस्तोे पोलिसी बनाईरहेको छ । भाउ यति घटाईदिन्छ सामसुङले । यो गर्दा बजारमा कमपेयर गर्दा सामसुङ नै सस्तो पर्छ । एउटा नामको कारणले नि सामसुङ नै किन्छ मान्छेले । त्यसै कारणले नि हामी ४८ प्रतिशतमा छौँ । बाकीँ कुरा, आफ्नो सेल्स सभिर्स देखि सारा कुरा, विज्ञापनमा धेरै खर्च गरेको छैन । कस्टोमरहरुलाई डाईरेक्ट बेनिफिट कसरी दिलाउने भन्ने कुरामा र विक्रिपछिको सेवा कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा यसले खर्च गरिरहेको छ । फोन सस्तो गरिरहेको छ । विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्दैन, यो अलरेडि नै स्टाबलिस्ट भैसकेको छ ।
भनेपछि मोबाईल विजिनेसबाट तपाईँ एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ ?
मैले नेपालमा मोबाईल विजिनेस गरेको २१ वर्ष भयो । जिवनमा सबैभन्दा बढि समय मोबाईल विजिनेसमा नै काम गरेँ । आज मलाई सामसुङकै नामबाट चिन्छन् । म खुसी छु ।
तपाईले चारचक्के गाडीमा नि हात हाल्नुभयो, सको पोजिसन के छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मैले कोरियन ब्राण्डको स्याङ्गयोङ्ग गाडीलाई नेपालको एजेन्सी बनाएँ । पहिला कसैको थियो एजेन्सी तर कुनै कारणबस त्यति चलाउन नसकेको कारणले त्यसलाई मैले टेकओभर गरेँ । करिब १ वर्ष भयो, मैले यसलाई लिगेको । स्याङ्गयोङ्ग ब्राण्ड मेरो कम्पनीलाई जसरी सामसुङले एउटा पोजिसन सहिसँग राखेको छ, स्याङ्गयोङ्ग को ईज्जत आफ्नो ठाउँमा राखेको छ । यसमा जिप भन्ने गरेका सानो कारहरु छैन, त्यो भैदिएको भए म्याक्सिमम क्वान्टिटी हामीले बेच्न सक्थ्यौँ । त्यो नहुँदा १ वर्षमा हामीले जम्मा ६०/७० ओटा बेच्यौँ । जुन चाहिँ एकदम राम्रो मान्छु किनकी महङ्गा गाडी मात्र छन् । अरु कमीकमजोरीहरु धेरै थिए जस्तै हाम्रो गाडीको आफ्ना सर्भिस सेन्टर छैन त्यसले गर्दा पनि बजारमा अलिकति, पार्टस नभएको भन्ने गलत ईमेज थियो पहिले , अयहले यो छ । अब हामीसँग नभएको साना गाडीहरु मात्र हो । अरु कुरामा हामी अहिले धेरै अगाडी पुगिसक्यौँ ।
अहिले चारचक्के गाडीको कुरा गर्दा, नेपालमा स्टाबलिस्ट भैसकेका धेरै ब्राण्डहरु छन् । तिनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ कि छैन ?
गाह्रो छ, यसलाई स्वभाविक रुपले लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा धेरै छ । तर हाम्रो निरन्तर मेहनत र आफ्नो लगनशिलता हुनु नै पर्छ । जस्तै मोबाईलफोनमा मैले निकै संघर्ष गरेँ, जसले गर्दा अहिले ४८ प्रतिशतमा राखेर बसिराछु । त्यहि सामसुङ अरु देशमा ४८ प्रतिशतमा छैन । त्यहि लगनशिलता मैले अहिले गाडीमा संघर्ष गरिराछु, त्यसले गर्दा अहिले अलिकति मुल्य महंगो पर्न आईरहेको छ । किनभने, केही ब्राण्ड गाडीहरु ईण्डियामा उत्पादन भएर नेपालमा आउँछ, तर हाम्रो चाहिँ कोरियामा उत्पादन भएर नेपाल आउँछ । जनताको बुझाई पनि के छ भने, ईण्डियामा बनेको गाडीहरु सस्तो हुन्छ तर कोरिया तथा जापानमा बनेको गाडी महँगो हुन्छ र टिकाउ पनि हुन्छ । त्यसले गर्दा म अहिले यो ठाउँमा त पुगिसकेँ । आशा छ, भोलीका दिनमा मेहनत गर्दै जाँदा हामी अरु गाडीको दाँजोमा आउन सक्छौँ ।
हाम्रो मुलुकमा कुरा गर्दा, हजुरले मार्केटिङ गर्नुहुने गाडी कत्तिको सुहाउँदो छ ?
हाम्रो मुलुकको कुरा गर्दा हाम्रो यहि गाडी नै सुहाउँछ । बाटोहरु खाल्डाखुल्डीहरु धेरै छ, कारहरु कसरी लैजाने ? त्यसैकारण वास्तवमा नेपाललाई यहि गाडी आवस्यक छ । तर बाटो साँघुरो तथा काठमाण्डौँ उपत्यकामा भने सानो गाडीहरु नै उपयुक्त हुन्छ, तर त्यो हाम्रोमा छैन ।
चाडपर्वहरु नजिकिँदै छ, यसलाईलाई ध्यानमा राख्दै उपभोक्ताहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
गाडीको भर्खरै नाडामा प्रचार सुरु भएको छ । निकट भविष्यमा हामी अन्य मोडलका गाडिहरु ल्याउँदै छौँ र साईननले पनि २०१९ देखि ईलेक्ट्रिट गाडि भित्राउँदैछ । स्याङ्गयोङ्ग गाडी महंगो छ र सर्भिस सेन्टर छैन भन्ने जुन गलत धारणा छ, त्यो अब टोटल्ली चेन्ज भैसकेको छ, हामीले सबै व्यवस्था मिलाईसकेका छौँ । यो हुनाले एकपटक गाडी चलाएर हेरिदिनुस्, भन्न चाहन्छु ।
मोबाईलको कुरा गर्दा, सामसुण्को मात्र नभएर एउटा विक्रेताको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने बिल सहितको मोबाईल किन्नुहोला, यसो हुँदा कानुनी रुपमा नै मोबाईल खरिद गरेका हुन्छौँ । गैरकानुनी रुपमा आएका मोबाईलहरुको बिल हुँदैन । त्यसो हुनाले मोबाईल किन्दा बिल सहितको मोबाईल किन्नुहोला । अन्त्यमा आउँदै गरेको दशैं, तिहार छठ लगायतको चाडहरुको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
Previousचाइल्ड पोर्नोग्राफी हेरेको भन्दै सांसदले पतिलाई जेल पठाए
Nextसप्तरीमा दुईसय सात केन्द्र अति संवेदनशील : निर्वाचन विथोल्ने ‘गोइत’को विज्ञप्ति
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न दलहरुलाई आग्रह
२३ जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०९:११
एमाले संसदीय दलको बैठक बस्दै, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न
३० असार २०७३, बिहीबार ११:२४
प्रचण्डलाई बाबुरामको प्रश्न : भरतपुरमा अनेक हतकण्डा अपनाएर छोरी जिताउनु के हो ?
१ मंसिर २०७४, शुक्रबार १८:४७
स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता बढी विवेकी
१५ जेष्ठ २०७४, सोमबार १५:०५